May 2012 | IT Sharing Network
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... အပျင်းပြေကစားဖို့ 3D Live Pool တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ... ဖိုင်ဆိုက်လည်းသေးသလို ကစားရတာလည်းပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးမို့ လိုချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ယူသွားနိုင်ပါတယ်...
Ace Translator 9.5.1.690 Multilanguage + Portable | 4.9 MB
ဒီကောင်လေးက languages အမျိုးမျိုးကို ပြောင်းလည်းပြန်ဆိုပေးနိုင်ပါတယ် ... အသုံပြုနိုင်တဲ့ languages (52) မျိုးကို အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ် ... French မှ English - Japanese မှ French စသည်ဖြင့်ပြောင်းလည်းပေးနိုင်ပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ အောက်မှာယူသွားနိုင်ပါတယ် ...
အကောင်းဆုံး Browser (10) မျိုးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်.... မိမိနဲ့အဆင်ပြေတာကို ရွေးသုံးလို့ရအောင် တခုခြင်းဆီရဲ့ Rating,Speed,Feature,Security,Operating System တွေကိုပါဖော်ပြပေးထားပါတယ်... ကြိုက်တာသာရွေးသုံးပေတော့ဗျို့...
Metro Interface on Touch Screen – Windows 8 အတွင်း ဖန်တီးထားတဲ့ interface အသစ်ဟာ သွက်လက်မြန်ဆန်ပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူပါတယ်။ ထို့ပြင် ၄င်းဟာ အမြင်သစ်ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် ယခင် ရင်းနှီးခဲ့ပြီးသား iOS ၏ ရိုးစင်းသော icon များနှင့် ပေါများလွန်းလှတဲ့ Android tablet များရဲ့ အမြင်ထက်တော့ အသစ် ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
Internet Explorer 10 - အခုအချိန်မှာတော့ Microsoft ဟာ ၄င်းတို့ရဲ့ web browser ကို standard ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်လာပြီ လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ Windows 8 အတွင်း ပါဝင်တဲ့ IE 10 ဟာ ယခင် version များထက် သာလွန်တဲ့အပြင် HTM5ကို support ပေးကာ speed အနေနဲ့လည်း ပိုမို မြန်ဆန်လာတာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။
All Avril Antivirus + License Keys Of Products 30 May 2012
All Avril Antivirus နှင့် key ဖိုင် ဒေါင်းလော့လင့် ခွဲတင်ပေးထားပါတယ် ...အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများနှင့် Softwale မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ဒေါင်းလော့ယူလို့ရအောင် မူရင်းဆိုက်က လင့်ကိုထည့်ပေးထားပါတယ်... ရှိပြီးသား သူငယ်ချင်းများ Key တစ်ခုတည်း ဒေါင်းလို့ရပါတယ် ....
ICL-Icon Extractor – enables you to export icons from any type of files and folders and even websites. The program offersaconvenient mode of viewing and sorting of collected icons, icons can be grouped by size, for example, 16×16, 32×32, 48×48, color, for example, monochrome, 16 color, 256 color, etc. The program allows to export icons in formats ICO, PNG, JPG, CUR, GIF, XPM and BMP, archive icons in format ZIP, remove duplicates, and more.
Internet Speed နဲ့ Web Browser တွေကိုမြန်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ ဆော့ဝဲလ်ပါ ... လင့်နှစ်ခုတင်ပေးထားပါတယ် အဆင်ပြေတဲ့လင့်ကနေယူသွားနိုင်ပါတယ်...cFosSpeed isanetwork driver, which attaches itself to existing Internet connections. It then optimizes data transfer by means of Traffic Shaping. Traffic Shaping isamethod for optimizing the Internet traffic. It allows maximum speed while ensuring minimal Ping. You can use cFosSpeed witharouter and/oraDSL-modem or cable-modem. You can also use cFosSpeed with other types of Internet access, ie. whenever you already have an existing Internet connection. cFosSpeed supportsawide variety of connections, like DSL, cable, ISDN, UMTS, etc.
Developer ကို သူရိန်ရေးထားတဲ့ Zawgyi Installer (Root) 4.7MB
Developer ကို သူရိန်ရေးထားတဲ့ဟာလေးညွှန်းချင်လို့ပါ...ကျွန်တော့်ဖုန်းမှာသုံးတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး (မရှိလို့) ကျွန်တော့်ညီမဖုန်းမှာ သုံးတာအဆင်ပြေလွန်းလို့ ပြန်ရှယ်လိုက်တာပါ... ကျွန်တော့်တို့ Blogမှာ post တွေ အတူတူရေးတဲ့ ကျွန်တော်တို့ အကိုကြီး ကိုကိုဝင်း ဆီကတဆင့်ရလို့ ပြန်ရှယ်ပေးတာပါ ...
Android ဖုန်းဆိုရင်တော့ System Font တွေပါ..အလန်းလေးပြောင်းလို့ရပါတယ်...
၁။ Root လုပ်ထားပီးသား စက်ရုပ်အားလုံး ရပါတယ်။ ( Root မလုပ်လို့ လုံးဝ မရပါ )
၂။ Samsung, TouchWiz ဖြစ်ဖြစ် Custom Rom ဖြစ်ဖြစ် ရပါတယ်။
၃။ Sony Xperia တွေ -ျြ- အပေါ်တက်နေတဲ့ ဖုန်းတွေအတွက်လဲ ဇော်ဂျီမိုဘိုင်းဖောင့် ထည့်ပေးထားပါတယ်။
Android Phone အတွက် Yangon & Mandalay လမ်းညွန် (27.1MB)
Android Phone ကိုင်ဆောင်ထားသူများအတွက် တကယ့်ကိုအသုံးဝင်မယ့် Application လေး
တစ်ခုပါ။ မိမိသိချင်တဲ့ နေရာတွေရဲ့လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်တွေကို အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အမြန်ဆန်ဆုံးရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးထွက် 2012 Version လေးပါ။ Yangon နဲ့ Mandalay မှာရှိတဲ့ ဆေးရုံဆေးခန်း ၊ ဌာနဆိုင်ရာ ၊ ဟိုတယ် ၊ ဈေး ၊ ဆိုင် ၊စတာတွေရဲ့လိပ်စာနဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကို Update ကောက်ယူပြီး ထည့်သွင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ယူသွားနိုင်ပါတယ်....
အရင်ကလည်းတင်ပေးဖူးတာမို့ ခေါင်းစဉ်လေးဖတ်လိုက်ယုံနဲ့ သိကြမှာပါ ... အသုံးပြုလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာယူသွားနိုင်ပါတယ်... keygen ကို run တဲ့အခါမှာ Anti virus ကို ပိတ်ထားပေးရပါမယ်...
Professional / Business ကြိုက်တာသုံးလို့ရတဲ့ CCleaner update အသစ်ထွက်လို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .... Install လုပ်မယ်ဆိုရင် ဒေါင်းလော့မှရလာသော Read me ကိုဖတ်ကြည့်ပေးပါ ... Install လုပ်ပုံကို ထည့်သွင်းရေးသားထားပါတယ် .... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ယူသွားနိုင်ပါတယ် ...
ကွန်ပြူတာမြန်ဆန်ကောင်းမွန်ဖို့ Advanced SystemCare Pro 5.3.0.245 Full Serial
ဒီကောင်လေးကို အသစ်ထွက်တိုင်း တင်ပေးဖြစ်ပါတယ် ... တကယ်ကောင်းတာမို့ အသုံးပြုစေချင်လို့ပါ... ကွန်ပြူတာ ကျန်းမာရေးအတွက် System Utility ထဲမှာ ကမ္ဘာ့ top စာရင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ် ... Iobite ကထုပ်တာဖြစ်ပြီး Free download အဖြစ် Uninstaller, game booster, Smart Defrag, freeware တို့ကို တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ် ...internet booster နဲ့ registry cleaner/defrag တို့က pro အဆင့်အထိပါဝင်ပါတယ်... internet speed နဲ့ download speed ကိုလည်း အကောင်းဆုံး အခြေအနေတရပ်အထိ တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ပါတယ် ... လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာတွေကတော့ Malware removal, Regisity Fix, regisity Defrag, System Optimization, Startup Optimization, Shortcut Fix, Privacy Sweep, Junk files clean, Security Defense, Disk Scan, Vulnerability Fix, Disk Defragment စတာတွေကို တစ်ချက်နှိပ်ယုံနဲ့ scan and repair တစ်ခါတည်းလုပ်နိုင်ပါတယ် ... Toolbox မှာလည်း Clean, Optimize, repair, Security and Control ဆိုပြီးအသီးသီးပြည့်စုံအောင်ထည့်ပေးထားပါတယ်... Turbo Boost ကိုလည်း on/off လုပ်ပြီး လိုသလိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ... ကွန်ပြူတာမြန်ဆန်ကောင်းမွန်စေဖို့ တကယ်သုံးသင့်တဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးပါ ... Install လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ အွန်လိုင်းကို ဖြုတ်ထားပေးရပါမယ် ...ကွန်ပြူတာမြန်ဆန်ကောင်းမွန်ဖို့ သုံးသင့်တဲ့ဆော့ဝဲလ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ... TuneUp သုံးတဲ့သူငယ်ချင်းများတောင် ဒီကောင်လေးသုံးပြီးတဲ့အခါမှာ Advanced SystemCare ဖြစ်သွားကြတာမို့ သူငယ်ချင်းများသုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်...
Android သုံးတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Kaspersky Mobile Security 9.10.112 လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ...
CClear ကအသစ်ထုပ်လိုက်တဲ့ CCleaner Network Profession အသစ်ထွက်လို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ... အသေးစိပ်သိရအောင် မူရင်းဆိုက်က စာသားအတိုင်းကူးယူဖော်ပြထားပါတယ် ... Install လုပ်တဲ့အခါ download မှရလာသော Read Me ထဲမှ Key ကို copy လုပ်ပြီးထည့်ပေးလိုက်ပါ .... Read Me ထဲမှာ install လုပ်ပုံကို ရေးသားတားပါတယ် ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ... တစ်ခုမှတ်ထားရမှာက ဒီဆော့ဝဲလေးကို install လုပ်ပြီး run တဲ့အခါ အသုံးပြုသူက CCleaner Network Profession ဖွင့်ဖို့ Password ပေးရပါတယ် password ကို အလွယ်ပေးပြီးမေ့သွားမှာဆိုးလို့ပါ ... နောက်တခါပြန်ဖွင့်ရင် ကိုယ်ပေးထားတဲ့ password နဲ့ ပြန်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ... CCleaner Network Profession က ကိုယ့် Network ထဲမှာ ရှိတဲ့ Gateway စသည်တို့ကိုပါဖော်ပြပေးပါတယ် ... ဒါကြောင့်မို့လည်း password သုံးပေးထားတာထင်ပါတယ် ... အင်တာနက်သုံးတဲ့ ကွန်ပြူတာတိုင်းဆောင်ထားသင့်လို့ ဒေါင်းလော့ယူထားစေချင်ပါတယ် .... ကျွန်တော်လည်း အစာအိမ်ရောင်တာ မပျောက်သေးလို့ ပို့တွေကို သေသေချာချာပုံတွေနဲ့ တင်မပေးနိုင်တာပါ... တင်ပေးဖို့တွေ တော်တော်မျာများကျန်နေပါသေးတယ် ....
အရင်ကလည်းတင်ပေးဖူးပါတယ် ... ဓါတ်ပုံတွေကို စိတ်ကြိုက် အလွယ်တကူပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ PhotoInstrument လေးက တော်တော်အသုံးဝင်ပြီး အသုံးပြုရတာလည်းလွယ်ကူပြီး ပေါ့ပါးမှုလည်းရှိလို့ အားလုံးလည်း အသုံးပြုတတ်မယ်ထင်ပါတယ်... အသုံးမပြုတတ်ရင်လည်း ဒီကောင်လေးမှာ install လုပ်ပြီးရင် အသုံးပြုပုံ နမူနာကို ကြည့်လို့ရပါတယ်...နမူနာပြုလုပ်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေကို အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ... Full version ဖြစ်ဖို့ အတွက် serial key ထည့်ပေးထားပြီး crack ဖိုင်ကိုတော့ serial key အဆင်မပြေခဲ့ရင်သုံးလို့ရအောင်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ် .... အသုံးပြုလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ယူသွားနိုင်ပါတယ် ...
ဒီကောင်လေးကတော့ ခေါင်းစဉ်လေးဖတ်လိုက်ယုံနဲ့ သိကြမှာပါ ... အမြဲတမ်းသုံးလို့ရအောင် serial key ထည့်ပေးထားပါတယ် ... မိမိ desktop ကို စိတ်ကြိုက် အလှဆင်နိုင်ဖို့ ပေးထားတဲ့ effect တွေနဲ့ function တွေက တော်တော်ဆုံပါတယ်... အောက်မှာလည်း နမူနာပုံ ထည့်ပေးထားပါတယ် ... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းအပေါင်း အောက်ကလင့်မှာ ယူသွားနိုင်ပါတယ် ...
Video ဖိုင် အပိုင်းတွေကို တစ်ပေါင်းတည်းဖြစ်အောင်ပြန်ဆက်လို့ရတဲ့ Boilsoft Video Joiner 6.57 Full (9.9MB) ကို ဒီလင့် မှာတင်ပေးပြီးသားပါ ... ဒီကောင်လေးကတော့ video ဖိုင်တွေကို splitter လုပ်လို့ရတဲ့ software လေးပါ .... သူရဲ့ Features တွေကိုလည်း အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ် ... အမြဲအသုံးပြုလို့ရအောင် serial key ထည့်ပေးထားပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းအပေါင်း အောက်ကလင့်မှာ ယူသွားနိုင်ပါတယ် ....
ဒီကောင်လေးက photo တွေကို recover လုပ်တဲ့အခါ လွယ်ကူကောင်းမွန်ပါတယ် ... အသုံးပြုရတာလည်း လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး ဖိုင်ဆိုက်ကလည်းသေးလို့ ဆောင်ထားရင်လည်းမမှားပါဘူး ... Full version ဖြစ်ဖို့အတွက် serial key ထည့်ပေးထားပါတယ် ... အသုံးပြုလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေဒေါင်းယူသွားနိုင်ပါတယ် ...
Photoshop မှတ်စုများ အတွဲ (1) 9.745MB ကို ဒီနေရာမှာ မှာတင်ပေးပြီးသားပါခင်ဗျာ .... ကျွန်တော်လည်း အစာအိမ်ရောင်နေတာရော လျှပ်စစ်မီးက တော်တော်အဆင်မပြေဖြစ်နေတာနဲ့ပါ ပို့တင်တာနည်းသွားတယ်ဗျာ ... အခုလည်း အရည်ပဲသောက်နေရတော့ လူကအားတော်တော်ပြတ်နေတယ် ... အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ ကျွန်တော့် blog လေးကိုလာလည်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ ကြိုးစားပြီး ပြန်လည်ဝေမျှပေးမှာပါ ... အဆင်မပြေတာများရှိခဲ့ရင်လည်း သည်းခံပေးကြပါဗျာ ...
အရင်ကလည်းတင်ပေးဖူးပါတယ် ဒါကတော့ update ဖြစ်ပြီး လူတိုင်းရင်းနှီးပြီးသား software လေးပါ ... မိမိရဲ့ data တွေကို တခြားသူ အလွယ်တကူ ဖွင့်ကြည့်လို့မရအောင် ကာကွယ်ပေးထားနိုင်တဲ့ software ဖြစ်ပါတယ် ... Full version ဖြစ်ဖို့အတွက် Serial Key ထည့်ပေးထားပါတယ် ... အသုံးပြုလိုတဲ့သူငယ်ချင်းအပေါင်း အဆင်ပြေတဲ့လင့်ကနေ ယူသွားနိုင်ပါတယ် ...
ဒါလေးက ဆိုင်မှာသုံးတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက်အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ် ... တစ်ချို့ဆိုင်တွေက IDM နဲ့ဆွဲခွင့်မပေးကြပါဘူး... ဒီကောင်လေးနဲ့ဆွဲကြည့်ကြပါ ... အရင်ကလည်းတင်ပေးဖူးပါတယ် ... သုံးဖူးတဲ့သူငယ်ချင်းများကတော့ သိကြမှာပါ ... အသုံးပြုလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းယူသွားနိုင်ပါတယ် ...
Orbit Downloader, leader of download manager revolution, is devoted to new generation web (web2.0) downloading, such as video/music/streaming media from Myspace, YouTube, Imeem, Pandora, Rapidshare, support RTMP. And to make general downloading easier and faster.Orbit Downloader isafree social music,video and file downloader.It support to download music and video from Pandora,YouTube,Yahoo,IMEEM,MySpace,Last.fm,Dailymotion, Metacafe,RapidShare.
Download SpeedyFox 2.0.2 Speedup Firefox, Skype, Chrome, Thunderbird inaSingle Click!
အရင်တုန်းကလည်းတင်ပေးဖူးပါတယ် ... Firefox, Skype, Chrome, Thunderbird တို့ကို ကလစ်တချက်နှိပ်ယုံဖြင့် speed မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်...
Simple is definitely one of the best ways to describe SpeedyFox,aone-window, no options tool to optimize the performance of Firefox. SpeedyFox claims to speed up Firefox by defragmenting its SQLITE databases. It says that these databases get out of shape over time, slowing down start-up and delaying operations with cookies and history.Mozilla Firefox is by far the best feature-rich and fastest browser out there, but with the passage of time it slows down considerably. It will takealot of time to load during startup, the overall speed will be effected, and browsing Histories will be too slow. This is very common problem and it occurs largely because of fragmentation of databases.
ဒီကောင်လေးကတော့ video ဖိုင် အပိုင်းတွေကို တစ်ပေါင်းတည်းဖြစ်အောင်ပြန်ဆက်လို့ရတဲ့ software ဖြစ်ပါတယ် ...ကျွန်တော်တို့ video ဖိုင်တွေကို လိုအပ်သလို ဖြစ်တောက်ပြီးတဲ့အခါ Track အပိုင်းပိုင်းတွေကို တစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်ပေါင်းပေးနိုင်ပါတယ်...အသုံးပြုပုံကို အောက်မှာ ပုံတွေနဲ့ အဆင့်ဆင့်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ... အသုံးပြုလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ယူသွားနိုင်ပါတယ်...
Boilsoft Video Joiner 6.57 Full Serial is the software whose main function is to merge several videos into one video withasimple and easy way. So for those of you who want to combine video and want to use the software lightweight and easy to use, then Boilsoft Video Joiner 6.57 Full Serial could be your choice. So, simply download Boilsoft Video Joiner 6.57 Full Serial.
Xilisoft YouTube HD Video Converter 3.2.0 bluit 20120517 Full License
ဒီကောင်လေးကိုတော့ အထွေအထူးပြောစရာမလိုအောင် သိကြပြီးသားပါ ... Xilisoft YouTube HD Video Converter 3.2.0 bluit 20120517 လေးကို DOWNLOAD Setup File (22.998MB) နှင့် Get Serial ဆိုပြီး လင့်နှစ်ခုခွဲတင်ပေးထားပါတယ် ... အသုံးပြုလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာယူသွားနိုင်ပါတယ် ...
RonyaSoft Poster Designer 2.01.38 Full with Keygen (18.6MB)
ဒီကောင်လေးက photo တိုတွေကို မျိုးစုံကလိချင် အလှဆင်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ သဘောကျကြမှာပါ ... အသုံးပြုရတာလည်းလွယ်ကူရိုးရှင်းလို့ အသေးစိပ်မဖော်ပြတော့ပါဘူး ... ကျွန်တော့်ဓါတ်ပုံကို အောက်မှာ နမူနာပုံလုပ်ပြပေးထားပါတယ် ... အမြဲအသုံးပြုလို့ရအအောင် keygen ထည့်ပေးထားပါတယ် ... အသုံးပြုလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းယူသွားနိုင်ပါတယ် ...
CPE ရဲ့ အမျိုးအစားကတော့ TP Link (TL-WA5210G) CPE အမျိုးအစားပါ။ကျွန်တော်လည်း သိပ်မကျွမ်းကျင်ပါဘူး သူငယ်ချင်းတွေ မေးထားလို့ စမ်းပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါ။ cpe က မျက်နှာတဖက်ထဲကိုလွင့်ဒါဆိုတော့ လွင့်တဲ့ ဘက်က cpe တစ်ခုနဲ့ ဖမ်းမဲ့ ဘက်က တစ်ခုနဲ့ နှစ်ခုလိုမှာပါ။ ဝေးဝေးလေးသွားစေချင်တယ် ဆိုရင်တော့ တိုင်ကို ခပ်မြင့်မြင့်လေးဒေါင်ပေးပါ။
ပထမဆုံး လွှင့်မဲ ဘက်က cpe ကိုပြောပါ့မယ်။ cable အနေနဲ့ကတော့ cat6cable ကို အသုံးပြုရမှာပါ။ network ခေါင်းကိုတော့ cpe ၀ယ်တဲ့ဆိုင်ကိုရိုက်ခိုင်းလိုက်ပါ။
CPE ဘူး၇ဲ့ RJ 45 Port မှာ ခုန ခေါင်းရိုက်ထားတဲ့ cat6cable ရဲ့ ခေါင်းတစ်ဖက်ကို တပ်ရမှာပါ။
.နောက်တစ်ဘက်ကိုတော့ TP Link Adaptor ရဲ့ POE ဆိုတဲ့ RJ 45 port မှာတပ်ပါ။ထို့နောက် ပါဝါ Adaptor ကို တပ်ပြီးတော့ မီးပလက်မှာ ထိုးလိုက်ပါ။ဘူးထဲမှာ ပါလာတဲ့ RJ 45 Cable အဖြူေ၇ာင် အတိုလေး၇ဲ့ ခေါင်းကို TP LInk Adaptor ရဲ့ LAN ဆိုတဲ့ RJ 45 Port မှာတပ်ပါ။ကျန်တဘက်ကိုတော့ Computer ၇ဲ့ LAN Port မှာတပ်ပါ။
အကိုတစ်ယောက်က တောင်းဆိုထားတာတွေ့လို့ MAC (Media Access Control) changer လေး တောင်းထားတာတွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီကောင်လေးက ပုံမှာ မြင်တွေ့ရတဲ့ အတိုင်း အသုံးရလွယ်ကူမယ့် အဆင်အပြင်နဲ့မို့ အသုံးပြုရ အလွန်ပဲလွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်။ ကိုယ် clone ပြီး သုံးချင်တဲ့ MAC address ရိုက်ထည့်ပြီး change ရုံပါပဲ။ Windows7မှာ သုံးရင် ပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်ဗျာ။ တခြားအသုံးတည့်မယ့် changer တွေ အများအပြားရှိပေမယ့်.....
ဒီကောင်လေးက မိမိ screen ကို record လုပ်လို့ရတဲ့ MSN Recorder Max 4.4.1.8 ဖြစ်ပါတယ် ... webcam, desktop စသည်တို့ကို မိမိနှစ်သက်ရာ format နဲ့ဖမ်းယူထားလို့ရပါတယ် ... သူ့ရဲ့ Features တွေကိုအောက်မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်...အမြဲအသုံးပြုလို့ရအောင် keygen ထည့်ပေးထားပါတယ် ... (မသိသေးသူများအတွက် ) keygen.exe ကို run ပြီး product နေရာမှာ MSN Recorder Max v4 ကိုရွေးပြီးမှ Generate ကိုနှိပ်ပြီးမှ serial key ကို copy လုပ်ရပါမယ် ... install လုပ်တာနဲ့ အသုံးပြုပုံကလွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ် ... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းအပေါင်း အဆင်ပြေတဲ့လင့်ကနေ ဒေါင်းယူသွားနိုင်ပါတယ် ....
Record your favorite MSN chatmate’s webcam video easily and instantly.Capture the whole MSN conversation in real time.Record full screen or other items shown on your desktop easily.
windown+R ကိုနှိပ် ပြီတော့ regeditဟုရိုက် ပြီး enter နှိပ်လိုက်ပါ ပြီးတော့ yes ပေါ့ 
ပေါ်လာတဲ့ အကွက်ထဲက hkey current user အပေါင်လေးကိုနှိပ်ပြီး
ဒီလင့် မှာ Back Track သုံးပြီး Wifi password ဖောက်နည်းစာအုပ် Wifi Hacking Basic စာအုပ်ကိုတင်ပေးပြီးသားပါ... အခုသိလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ မေးထားတာရှိလို့ Aircrack-ng-1.1-win ကိုအသုံးပြုပြီး ၀င်းဒိုးပေါ်မှာ crack လုပ်နည်းကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ... win ပေါ်မှာ crack လုပ်တာက ပိုအဆင်ပြေပါတယ်... word list တွေကို ဒေါင်းလော့လုပ်လိုက် crack လုပ်လိုက်နဲ့ အဆင်ပြေပါတယ် ... Back Track ကိုသီးသန့်ဖွင့်ပြီး crack လုပ်တာကိုစောင့်နေစရာမလိုတော့ပါဘူး .... ပထမဆုံး Aircrack-ng-1.1-win (3.7MB) ကို အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့လင့်ကနေ အရင်ဒေါင်းလော့ဆွဲလိုက်ပါ ....
CD/DVD ခွေတွေမှာ Label ထိုးဖို့အတွက် အလွယ်တကူဒီဇိုင်းဆွဲလို့ ရေးလို့ရတဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ.... Template မျိုးစုံကိုလည်းထည့်ပေးထားတဲ့အပြင် မိမိအသုံးပြုလိုတဲ့ ပုံတွေ text တွေကိုပါ အလွယ်တကူထည့်သွင်း ရေးသားနိုင်ပါတယ် .... ဒီကောင်လေးအပေါ်ကနေလည်း print ထုပ်လို့ရပါတယ် .... သူရဲ့ Features တွေကို အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ် .... အသုံးပြုလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ အဆင်ပြေတဲ့လင့်ကနေ ဒေါင်းလော့ယူသွားနိုင်ပါတယ် ....
ဒီကောင်လေးက Mobile antivirus ဖြစ်ပါတယ် ... Dr. Web Anti-virus လည်းနာမည်ကြီးထဲမှာ တစ်ခုအပါအ၀င်ပါပဲ ... ဖုန်းနဲ့ အင်တာနက်အသုံးပြုသူများလာတော့ ဒီကောင်လေးတွေ့တာနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .... အသုံးပြုလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ အဆင်ပြေတဲ့လင့်ကနေ ယူသွားနိုင်ပါတယ် ....
ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုနေတဲ့ Network ထဲက viruses, trojans တွေနဲ့ malware တွေကို ရှင်းလင်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီးတော့ virus database တွေကို Up to date ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးပါတယ် ... အင်တာနက်အသုံးပြုနေတဲ့စက်တွေတိုင်း ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးဖြစ်ပြီး မည်သည့် Anti Virus နှင့်မဆို တွဲတင်ထားလို့ရပါတယ် .... အသုံးပြုလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ ဒေါင်းလော့လင့်နှစ်ခုတင်ပေးထားပါတယ် ကြိုက်နှစ်သက်ရာလင့်မှ ယူသွားနိုင်ပါတယ် ...
The main idea of EMCO Network Malware Cleaner - web content "clean" from various Virus scanning and cleaning of nodes in the network from viruses, worms and Trojans. EMCO Network Malware can check the existence of anti-virus protection on remote machines.
The scanning process runs in parallel on different nodes. EMCO Network Malware Cleaner - it's not scanning engine in real time, its main purpose is to check and remove any virus, worm and trojan on remote machines on the network.
Registry ထဲကနေ Internet Download Manager ကို download speed မြှင့်မယ်
Registry ထဲကနေ Internet Download Manager ကို download speed မြှင့်တဲ့နည်းလေးပါ ... တကယ် download speed တိုးမတိုးကတော့ ကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်မှသိမှာပါ ... အောက်မှာပုံလေးတွေနဲ့ တဆင့်ခြင်းဖော်ပြပေးထားပါတယ် ... ပထမဆုံး IDM ကိုဖွင့်ပါ ....
မိမိ network ထဲက စက်တွေကို ကြည့်လို့ရတဲ့ software ဖြစ်ပါတယ် .... ၀ိုင်ဖိုင်သုံးတဲ့သူတွေကော ရောင်းတဲ့လူတွေအတွက်ပါပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ် ... 32bit နှင့် 64bit အတွက်ပါပေါင်းတင်ပေးထားပါတယ်... Install လုပ်စရာမလိုပါဘူး ... အောက်မှာလည်း ဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာကို ပုံနဲ့ ပြထားပါတယ် ... အသုံးပြုလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ အဆင်ပြေတဲ့လင့်မှာ ဒေါင်းလော့ယူသွားနိုင်ပါတယ် ...
dvd အခွေကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီး ချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက်ပါ။AVI/DIVX/XVID/DIV, MPEG/MPG/DAT, WMV/ASF/ASX, RM/RMVB, MOV/QT, 3GP/3G2, MP4/M4V, and FLV ဖိုင်တွေမှ dvd ဖိုင်အဖြစ်ပြောင်းပေးမှာပါ။ အသွင်အပြင်လေးကလည်း ရိုးရှင်းပါတယ်။ နဲနဲလေး ကလိလိုက်တာနဲ့ အဆင်ပြေသွားမှာပါ ။အသုံးပြုကြည့်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက်ပါ။
Recover software လေးပါ။ အသစ်အစမ်းလေးမို့တင်ပေးလိုက်တာပါ။ မှားဖျက်မိတဲ့ဖိုင်တွေဖြစ်တဲ့ file,folder,document,picture,mp3 နဲ့ compressed zip ဖိုင်တွေကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်လေးမှဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
Learning About Computer Hardware In5Minutes (2.42MB)
Computer Hardware အကြောင်းရေးသားထားတဲ့စာအုပ်ပါ ... ဒေါင်းလော့လင့်နှစ်ခုတင်ပေးထားပါတယ် ... အဆင်ပြေတဲ့လင့်မှ ယူသွားနိုင်ပါတယ် ...
ဘာမှတော့မခက်ခဲပါဘူး အောက်က ဖိုင်လေးကိုဒေါင်းလော့ လုပ်ပြီးတော့ run လိုက်ပါ ။ သူဖာသာသူသတ်သွားပြီး စက်ထဲက ဖယ်သွားပါလိမ့်မယ် ။ အားလုံးပြီးရင်တော့ enter သာ တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ recycler virus ကို သတ်လို့ရသွားပါလိမ့်မယ်။ သူငယ်ချင်းအားလုံးအတွက် အောက်မှာတင်ပေးထားပါတယ်။
The first and only free cloud-based antivirus thin-client with 50 percent less impact on PC performance compared to the industry average.
Panda Cloud Antivirus introducesanew protection model that utilizesathin-client agent and server architecture which processes and blocks malware more efficiently than locally installed signature-based products.
viruses, Trojans, worms, rootkits and other malicious programs ကာကွယ်ပေးမဲ့ အခမဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ။ smartupdate ပေးပါတယ်။ အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးတော့ powerful အလုပ်လုပ်ပေးပါတယ်။ အခမဲ့ ဗားရှင်းလေးအသုံးပြုချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက်ပါ။
advanced System Information tool ဆော့ဝဲဖြစ်ပါတယ်။ မိမိစက်ရဲ့ information အကုန်လုံးကို သိရမှာပါ။ ram ရဲ့ ပမာဏ တို့နဲ့ cpu ရဲ့ အမြန်နှုန်းတွေက အစပြပေးမှာပါ။ အသုံးပြုလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် အောက်ကလင့်လေးမှ ဒေါင်းယူသွားနိုင်ပါတယ်။